August 2021 – NRN Khabar
महासचिव पदमा बसेर काम गर्न अनुभव, भिजन र क्षमता आवश्यकता पर्छ : विनय अधिकारी- महासचिव पदको प्रत्यासी
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा महासचिव पदका उम्मेदवार विनय अधिकारीले संस्था चलाउन काम गरेको अनुभव, भिजन र क्षमता आवश्यक पर्ने र त्यो आफूमा मात्र रहेको बताउनु भएको छ । आगामी अक्टोवरमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा महासचिव पदका उम्मेदवार अधिकारीले संस्थालाई हाँक्न सक्ने र चलाउन सक्ने क्षमता आफ
एनआरएनमा झन झन बलियो बन्दै थापा-अधिकारी प्यानल
न्यूर्योक । गैर आवासीय नेपाली संघको आगामी अक्टोवरमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा रविना थापाको नेतृत्वको प्यानल झन झन बलियो बन्दै गएको छ । आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसीलाई थापाको टिमले टक्कर दिर्दैछ । थापाको टिमले बाहिरी प्रचारलाई भन्दा भित्री तयारीलाई बलियो बनाउँदै लगेको बुझिएको छ ।
काँग्रेसको भित्री रणनीति: कुल र रविनालाई सहमती गर्दै जमुना घलेलाई उम्मेदवारी बनाउने आन्तरिक योजना
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघको आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट जमुना गुरुगंलाई उम्मेदवारी बनाउने भित्री रणनीति बनाएको छ । कांग्रेसबाट रविना थापा र कुल आचार्यलाई सहमति गराउँदै शेष घले धर्मपत्नी समेत रहनु भएकी जमुना गुरुगंलाई अध्यक्षको लागि अगाडि सार्ने आन्तरिक तयारी थालीएको हो । कांग्रेसको
यस्तो बन्यो रविना थापाको टिम, कुन-कुुन देशबाट को-को समेटिए ?
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा रविना थापा नेतृत्वको टिम पनि बनेको छ । वर्तमान उपाध्यक्ष थापाले विश्वभरिका विभिन्न अग्रज तथा सबैलाई समेटेर समावेशी टिम बनाउनु भएको हो । थापाको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षको टिम तयार भएको छ । अन्य उम्मेदवारहरु पनि छिट्टै तयार हुने बत
महासचिव पदको उम्मेदवार अधिकारीलाई एनआरएन अभियन्ताहरुको साथ र समर्थन विश्वभरि बाट
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसिसीको अक्टोबरमा हुने दशौ महाधिवेशनको लागि बेलायत निवासी बिनय अधिकारीले महासचिवमा उम्मेद्बारी घोषणा गर्नु भएको छ । महाधिवेशनको मिति नजिकैदैजादा विभिन्न पदमा विभिन्न ब्यक्तिहरुले उम्मेद्बारी घोषणा संगै अधिकारीले पनि आफ्नो उम्मेद्बारी घोषणा गर्नु भएको । संचारकर्म
सिड्नी । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आइसिसी) को आगामी अक्टोवरमा हुने विश्व सम्मेलनमा ओशिनिया क्षेत्रबाट गणेश केसीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ । एनआरएनए अष्ट्रेलीयाको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएको केसीले ओशिनिया क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्षमा
एनआरएनए यूरोप युवा संयोजकमा रमेश काफ्लेको उम्मेदवारी घोषणा
डेनमार्क - गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूरोप युवा संयोजक पदमा डेनमार्कबाट रमेश काफ्लेले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ । काफ्लेले आगामी कार्यकालको लागि यूरोप युवा संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको हो । विगत लामो समयदेखि डेनमार्कमा बस्दै आउनु भएको काफ्लेले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प
आयरल्याण्ड । गैर आवासीय नेपाली संघ आयरल्याण्डका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन छन्त्यालले आगामी अक्टोवरमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रीय युवा संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ । छन्त्यालले आगामी कार्यकाल २०२१-०२३ को लागि युवा संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको हो । उहाँले संस्थाका अग्रज, अभियन्ता तथा
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समवन्य परिषद्को १० औं महाधिवेशनमा अजीब गुरुङ ‘ओम’ ले आइसीसी सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । ‘सम्वृद्धि, समावेशिता, सामुहिकता र संस्थागत सुदृढिकरणका लागि मेरो उमेदवारी’ भन्दै गुरुङले अग्रजहरुको आग्रह र आफ्नो